Saturday January 06, 2018 - 12:41:18 in Wararka by Super Admin
Wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda Dowladda Federaalka ayaa shaaca ka qaadday in dalka Soomaaliya uu kujiro marxalad gumeysi oo dhib badan iyadoona ka digtay in dowlado shisheeye ay dalka qabsadaan.
Fowziyo Xaaji Aadan oo katirsan Xildhibaannada Baarlamaanka horayna usoo hoggaamisay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Soomaaliya ay mareyso marxalad halis ah waxayna carrabka ku adkeysay in dowlado shisheeye ay walaaqayaan siyaasadda dalka iyo maamulka.
Waxay qirtay ciidamada dowladaha shisheeye ka socda ee dalka ku sugan ay danahooda eeganayaan islamarkaana aysan jirin siyaasad ka madax banaan dowlado shisheeye oo Soomaaliya ka shaqeysa.
"Runtii dalku xor maahan Baddi ayaa la heystaa Hawadi ayaa la heysan jiray Bariggii sidoo kale ciidamo ajnabi ahbaa heysta ,dhinacyo dowladda kasoo horjeedo iyana dhinac ayay ka heestaan, soomaaliya waxay waqtigaan joogtaa wan la qalay oo kale waayo waxa ay ku socotaa Wadada dagaalka ka socda Yemen mid lamid ah" ayay tiri Fowziyo.
Warkan kasoo yeeray wasiirradii hore ee arrimaha dibadda ayaa imaanaya xilli uu khilaaf xooggan ka dhax jiro Hoggaanka dowladda Federaalka islamarkaana kumanaan katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya iyo Kenya ay dalka xoog ku heystaan.
Fowziyo oo katirsaneed dowladdii ugu dabadhilifsaneed ee dalka soo martay ayaa hadda iska dhigaysa mid wadaniyad ah waxaase xusid mudan in dhammaan siyaasiyiinta DF-ka ay kawada simanyihiin dabadhilifnimada iyo shisheeye Jaceylka.